कोरोना म'हामारीको बेला यौ'न स'म्पर्क कत्तिको उचित ? - satkar post
कोरोना म’हामारीको बेला यौ’न स’म्पर्क कत्तिको उचित ?
काठमाडौं : विश्वलाई नै च’कित बनाउने गरी फैलिएकाे काेराेना भाइरस (काेभिड-१९) ले लाखाैं मानिसलाई है’रान बनाएकाे छ । चीनको वुहान शहरबाट गत डिसेम्बरमा सुरु भएको कोरोना भाइरस सं’क्रमण अहिले विश्वब्यापी म’हामारीको रुपमा तीब्र गतिमा फैलिरहेको छ । अहिलेसम्म यसको कुनै औ’षधि वा खो’प पत्ता लाग्न सकेको छैन् । याे महा’मारी नि’यन्त्रण बाहिर छ ।
गरिब देशभन्दा संसारका श’क्तिशा’ली मानिएका चीन, युरोप अमेरिका यो भाइरसको सबैभन्दा बढी च’पेटमा परेका छन् । कोरोना भाइरसका विषयलाई लिएर विभिन्न खालका सूचना जानकारी समाचारहरु समाजिक सञ्जालमा भा’इरल भइरहेका छन् । तर, त्यस्ता जानकारी र समाचारहरु सबै स’त्य छैनन् । ती जानकारीहरुले धेरैलाई अल’मल बनाइदिएको छन् ।
अहिले अनेक खालका जानकारीतिर भन्दा पनि मानिसहरु पूरानो फोटोमा क’मेन्ट हाम्रो भे’ट कहिले भएको थियो, कहाँ भएको थियो भन्ने जस्ता कुराहरु फेसबुकमा पोष्ट गरेर दिन क’टाइरहेका छन् । यस्तैमा धेरैलाई जि’ज्ञासा लागेको विषयमा वि’ज्ञहरुको रा’यका आधारमा बीबीसीले रि’पोर्ट प्रस्तुत गरेको छ । के यौ’न स’म्पर्कका कारण कोरोनाभाइरस स’ङ्क्रमण सर्न सक्छ ?
यसबारे तपाईँले सोच्नुभएको होला तर स’ङ्कोच लागेर प्रश्न नगर्नुभएको पनि हुन सक्छ । यस विषयमा सही र ग’लत कुरा छु’ट्याउन बीबीसी रेडियो वनको न्यूजबीटले यो प्रश्न वि’ज्ञहरूलाई राखेको छ । डा. एलेक्स जर्ज चि’कित्सक हुन् भने यौ’न विषयमा पत्रकारिता गर्ने एलिक्स फक्स बीबीसी रेडियोकी पूर्वप्रस्तोता हुन्।
के कोरोनाभाइरस महा’मारीको समयमा यौ’न स’म्पर्क सुरक्षित राख्नु सुरक्षित हुन्छ ?
डा. एलेक्स जर्ज: यदि तपाईँ सम्बन्धमा हुनुहुन्छ र त्यो मानिससँगै बस्नुहुन्छ र एउटै वातावरणमा रहनुहुन्छ भने तपाईँले यौ’न व्य’वहारमा प’रिवर्तन गर्नुपर्दैन। तर यदि तपाईँहरूमध्ये एक जनामा कोरोनाभाइरसको ल’क्षण देखिएको छ भने तपाईँले घरमै पनि एकान्तवासमा बस्नुपर्छ। सबैभन्दा राम्रो त घरभित्रै पनि सबै जना एकअर्काबाट दुई मिटरको दूरीमा बस्नुपर्छ तर त्यो सधैँ सम्भव नहुन सक्छ।
आफूलाई ल’क्षण देखिँदा आफ्नो सह’वासीलाई पनि देखिन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन । यदि तपाईँलाई ल’क्षण देखिएको छ भने टाढा रहनु नै उचित हुन्छ।
नयाँ मानिससँग यौ’न स’म्पर्क राख्नु हुन्छ ?
डा. एलेक्स जर्ज: म यो अवस्थामा नयाँ मानिससँग यौ’न स’म्पर्क राख्ने स’ल्लाह दिन्नँ। किनभने त्यसो गर्दा कोरोनाभाइरस स’र्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। के नबिर्सिनुहोस् भने कोरोनाभाइरस भएका केही मानिसहरूमा ल’क्षण देखिएको हुँदैन । त्यसैले तपाईँ एकदमै ठिक देखिनुभएको छ भने पनि तपाईँबाट अरूमा चुम्ब’नबाट पनि भाइरस सर्न सक्छ।
पहिले मैले क’न्डम प्रयोग गरेको थिइनँ । के अब गर्नुपर्ला ?
एलिक्स फक्स: यसको उत्तर तपाईँ किन पहिले कन्ड’म लगाउनु हुन्नथ्यो भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। यदि तपाईँहरू दुवै जनालाई कुनै यौ’न रो’ग नभएको वा ग’र्भाधान नहोस् भनेर अन्य उपाय अवलम्बन गरिएकाले कन्ड’म प्रयोग नगरेको भए केही फरक पर्दैन। तर यदि तपाईँ अन्य प्राकृतिक उपाय – जस्तो वी’र्य स्ख’लन गर्ने वा एकअर्कालाई यौ’न रो’ग छैन भन्ने विश्वासमा कन्ड’म नलगाउनुभएको हो भने अब कन्ड’म लगाउनु नै उचित होला।
डा. एलेक्स जर्ज: यदि तपाईँ एकअर्काको यौ’नाङ्ग छुनुहुन्छ भने त्यो समयमा तपाईँहरूले चुम्ब’न गर्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ र हामीलाई थाहा छ भाइरस थुकबाट सर्छ । मुखबाट हातमा, हातबाट यौ’नाङ्गमा, यौ’नाङ्गबाट हातमा र त्यसपछि हातबाट ना’कमुखमा भाइरस सर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा भाइरस सर्न सक्ने सबै खाले कुराहरू नगर्नु नै उचित हुन्छ । त्यसैले तपाईँसँगै नबसेका साथीसँग यो पनि नगर्नु नै उचित हुन्छ। बीबीसीबाट
कर्णालीका अस्पताललाई १७ लाख बढिको अक्सिजन कन्स्ट्रेटर सहयोग #Kapil Thakuri सुर्खेत । कर्णालीका विभिन्न अस्पताललाई सात वटा अक्सिनज कन्स्ट्रेटर सहयोग...